बालक ध्रुव | मझेरी डट कम
एक दिन राजा उत्तानपाद र सुनीति जङ्गलमा बाघको शिकार गर्न गए । तीर सुनीतिले चलाइन् । बाघ त मर्यो तर त्यसमा तीर दुइटा थियो । शिकार लिन जाँदा अर्कै देशकी राजकुमारी सुरुचिले आफूले पहिले शिकार गरेको तीर त्यहीँ छ भनेर ठुलो विवाद गरिन् । उनीहरूबीच ठुलो वैमनस्यता भयो ।
एक दिन राजमहलमा एउटी नर्तकी आफ्नो नृत्यकला देखाउन आइन् । राजा धेरै खुसी भए । उचित पारिश्रमिक लिनका लागि राजाले माग गरे । नर्तकीले पनि वाचा बँधाइन् । राजा पनि कम्तीका थिएनन् प्राय: सम्पूर्ण पृथ्वीमा उनको राज थियो । त्यो वैभवता यथावत् राख्न राजाले जे भने पनि दान दिने वचन दिए । उनले राजासँग बिहे गर्ने माग राखिन् । राजा निकै रिसाए । तर रानी सुनीतिले भावी राजकुमारका लागि यो नै उत्तम उपाय हो भनेर दबाब दिइन् । राजगुरुले पनि दबाब दिए । त्यत्तिकैमा उक्त नर्तकीले आफू सुरुचि भएको कुरा भेष उधारेर खोलिन् । सम्पूर्ण प्रजाहरूले “महारानी सुरुचिकी जय !” भन्दै समर्थन जनाए । त्यसपछि सुनीतिमा पनि सुरुचिप्रति वैमनस्यता भएन । यस्तो करकापमा राजाको अर्को बिहे भयो । राजाले सुनीतिलाई यत्ति अगाढ माया गर्दथे कि बिहेको पहिलो रातमा पनि सु्रुचिकहाँ नगइकन राजा सुनीतिकहाँ नै बसिरहे ।
धेरै समयसम्म पनि राजाको एकोहोरो सुनीतिसँगको प्रेममा कुनै कमी आएन भने सुरुचिलाई पटक्कै वास्ता गर्दैनथे । एक दिन सुरुचिले राजालाई थाहा नदिइकन षड्यन्त्र गरेर सुनीतिलाई देश निकाला गरिन् । सुनीति त्यतिबेला गर्भवती थिइन् । जाँदा–जाँदा उनी ठुलो हरिभजन गरिरहेको ठाउँमा लड्न पुगिन् । त्यहाँ उनले हरिको मूर्ति अगाडि बच्चा जन्माइन् । उक्त बालकको नाम त्यहाँका ऋषिहरूले ध्रुव राखे । ध्रुव बढ्दै गए । त्यहाँ शारदा विश्वविद्यालय पनि थियो । उक्त विश्वविद्यालयमा राजकुलका छोराछोरीहरू मात्र पढ्न पाउँथे । सुनीतिले भेद खोले फेरि षड्यन्त्रमा पर्न सक्ने डरले राजकुमार हो भन्ने बताइनन् ।
ध्रुवले सोही विश्वविद्यालयमा पढ्ने जिद्दी गरेकाले उनकी माता सुनीतिले गुरुहरूसँग विन्ती गर्दै भनिन् :–“सूर्यको प्रकाशले कहाँ भेद गरेको छ ? को ठुलो को सानो ? सबैमा समान प्रकाश दिन्छन् । वर्षाले कसलाई भेद गरेका छन् ? पृथ्वीको सानो ठाउँमा पनि उही शीतलता दिन्छन् । ठुलो ठाउँमा पनि उही शीतलता दिन्छन् । वायुले कसलाई भेद गरेका छन् ? सबैलाई ठुलो–सानो नभनी प्राण श्वास दिन्छन् ।” यस्ता सुनीतिका नीतियुक्त कुरा सुनेर ध्रुवलाई उक्त विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्न त्यहाँका गुरुहरूलाई करै लाग्यो । सानै भए पनि तीक्ष्ण बुद्धिका कारण उनी सबैभन्दा अव्वल देखापरे । सुरुचिका छोरा उत्तम पनि त्यहीँ पढ्थे । उत्तमलाई नआएका हरेक कुरा ध्रुवसँग सिक्थे । एक दिन उत्तमले ध्रुवलाई राजासँग उक्त विद्यालयमा आएका बेला भेट्टाए ।
राजा पनि ध्रुवसँग यत्ति मोहित भए कि यदि आफ्नो छोरा भएका भए उनलाई नै राज्य चलाउन दिने भनेर सुरुचिलाई बताए । सुरुचिलाई यस कुराले जलन भयो र ध्रुवलाई तड्पाउन बाबुविनाको छोरो भनेर वचनवाण प्रहार गरिन् । त्यस कुराले हतास भएर ध्रुव आफ्नी माताकहाँ प्रश्न गर्न गए । त्यहाँ गुरु पनि आइपुगे ।
“भन्नुस् माताश्री मेरा पिता परेदशमा छन् कि छैनन् ? मलाई यत्तिका दिनसम्म किन ढाँट्नुभो ?” गुरुलाई सहन गर्न गाह्रो भयो र भने :—“हे पुत्र ! तपाईं राजकुमार हुनुहुन्छ । महाराज उत्तानपाद तपाईङ्का बुबा र उनी महारानी सुनीति नै तपाईङ्की माता हुनुहुन्छ । सुरुचि तपाईङ्की कान्छी माता हुनुहुन्छ भने उत्तम तपाईङ्का भाइ हुन् ।”
यत्ति कुरा सुन्नेबित्तिक्कै पाँच वर्षका बालक ध्रुव सरासर राजमहलतर्फ गए । त्यसैबेला राजा उत्तानपाद पुत्र उत्तमलाई काखमा राखेर माया गरिरहेका थिए । धु्रवले पनि आफ्ना पिताका काखमा बस्ने इच्छा गरे । सुनीति पनि त्यहीँ आइपुगिन् ।
घमण्डले भरिएकी सुरुचिले आफ्नी सौताको पुत्र आफ्ना महाराजको काखमा बस्ने प्रयत्न गरेको देखेर तुरुन्तै छुरी लिएर आइन् र :—“यदि यसो गरेमा यसै छुरीले आफैँलाई डसेर प्राण त्याग्ने ।” धम्की दिइन् भने ध्रुवका अगाडि कठोर शब्दमा भनिन् :–“बच्चा ! तिमी राजसिंहासनमा बस्ने अधिकारी होइनौ । तिमी पनि राजाकै पुत्र हौ तर यसरी केही पनि हुन्न । तिमीले मेरो कोखबाट जन्म लिएका छैनौ त्यसैले । यदि तिमीले आफ्ना पिताको काखमा बस्नु छ भने परम पुरुष श्रीनारायणको आराधना गरेर उनका कृपाले मेरो गर्भमा आएर जन्म लेऊ । अनि मेरो कोखबाट जन्म लिइसकेपछि तिमी पिताको काखमा बस्नू ।”
ध्रुव एकदम रिसाए । जस्तो लट्ठीको चोट खाएर सर्पले फुँफुँ गरेर डस्न तम्सन्छ । यसै प्रकार आफ्नी सौतेनी आमाको कठोर वचनले घायल भई रिसले चूर भएर लामो–लामो श्वास फेर्न थाले । उनका पिता टुलुटुलु हेरिरहे । मुखबाट एकशब्द पनि निकाल्न सकेनन् ।
तब पितालाई छोडेर ध्रुव रोएर आफ्नी माताकहाँ छाँद हाल्न पुगे । बालक ध्रुव घ्वाँघ्वाँ गरी ठुलो–ठूलो स्वरले रुन थाले । सुनीतिले पुत्रलाई काखमा लिइन् र महलका अरूहरूबाट पनि आफ्नी सौता सुरुचिका यस्ता कुरा सुनेर अति दु:खित भइन् । उनका आँखाहरूबाट आँसु झर्न थाले ।
सुनीतिले लामो श्वास लिएर ध्रुवलाई भनिन् :—“पुत्र ! तिमी अरूका लागि कुनै अमङ्गल कामना नगर । जुन मनुष्यले अरूलाई दु:ख दिन्छ, उसले यसको फल अवश्य नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । सुरुचिले जे पनि भनिन् ठीकै भनिन् किनकि महाराजले मलाई श्रीमती त के आज दासी मान्न पनि लाज मानिरहेका छन् । तिमीले म अभागीनको गर्भमा जन्म लिएका छौ र मेरो दूधबाट पालिएका छौ । पुत्र ! सुरुचि तिम्री सौतेनी आमा भएर पनि बिलकुल ठिक भनिरहेकी छिन् । अत: यदि राजकुमार उत्तम समान राजसिंहासनमा बस्न चाहन्छौ भने द्वेषलाई छोडेर त्यही वचनलाई पालना गर । बस् अब उही सर्वशक्तिमान भगवाङ्का चरणकमलमा आराधना गर्नमा लाग । पुत्र ! तिमी उही भक्तवत्सल श्रीभगवाङ्कै आश्रय लेऊ । तिमी अब कुनै पनि कुरामा ध्यान नदेऊ । कुनै पनि चिन्ता नगर केवल उहाँकै भजनमा लाग ।”
जब ध्रुवले आफ्नी माताका यस्ता वचन सुने तब वैरागी भए र भगवाङ्को तपस्याका लागि वनतिर प्रस्थान गरे ।
जब ध्रुव वनतिर गइरहेका थिए तब बाटामा नारदजीलाई भेटे । नारदजीले ध्ुवलाई भने :—“पुत्र ! अहिले तिमी बच्चै छौ । खेलकुदमा मस्त रहने बेला हो यो । मलाई थाहा भएन कि कुनै पनि कुराले तिम्रो मानमा अपमान हुन सक्छ र ? यो मैले बुझिनँ । जाऊँ म तिम्रो पिताको काखमा तिमीलाई बसाइदिन्छु ।”
ध्रुवले भने :–“ब्राह्मण ! अब मलाई कुनै पिताको काखमा बस्नु छैन । मलाई त उही परमपिता परमात्माको काखमा बस्नु छ । अब संसारको कुनै कामना मलाई छैन । त्यसैले तपाईंले मलाई उही परमात्मा प्राप्तिको कुनै राम्रो बाटो देखाइदिनुहोस् । तपाईं भगवान् ब्रह्माजीका पुत्र हुनुहुन्छ र संसारको कल्याणका लागि वीणा बजाएर सूर्यले जस्तै त्रिलोकमा विचरण गरिरहनुहुन्छ ।”
ध्रुवका यस्ता कुरा सुनेर नारदजी एकदम प्रसन्न भए र भने :—“पुत्र ! तिम्रो कल्याण हुनेछ । अब तिमी यहाँको नदीको तटवर्ती क्षेत्रको मधुवनमा जाऊ । त्यहाँ श्रीहरिको नित्य निवास छ । त्यहाँको नदीको निर्मल जलले तीन पटक बिहान, दिउँसो, साँझ स्नान गरेर निवृत्त भएर यथाविधि आसन बिछ्याएर स्थिर भावमा बस्नू । फेरि रेचक, पूरक र कुम्भक तीन प्रकारका प्राणायामले बिस्तारै–बिस्तारै प्राण, मन र इन्द्रियहरूका दोषहरू हटाएर धैर्यपूर्वक धैर्ययुक्त मनले परम गुरु श्रीभगवाङ्को ध्यान गर्नू ।” नारदजीले श्रीभगवाङ्को सुन्दर छविको वर्णन गरेर स्मरण गर्ने तरिका पनि बताए । त्यस्तै नारदजीले ध्रुवलाई एउटा मन्त्र प्रदान गरे “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय:” र यो मन्त्रद्वारा भगवान्लाई तपस्या गर्ने पूजाविधि बताए । फेरि नारदजीले सुन्दर उपदेश दिए । अनि बालक ध्रुवले नारदजीलाई परिक्रमा गरेर नमस्कार गरे र मधुवन प्रस्थान गरे ।
यता नारदजी उत्तानपादको महलमा पुगे र भने :—“राजन् ! तपाईङ्को मुख सुकेको छ । धेरै बेरसम्म कुन त्यस्तो सोचमा डुबिरहनुभएको छ ?”
राजाले भने :—“ब्राह्मण ! म धेरै स्त्रैण र निर्दयी भएँ । हाय ! मैले आफ्ना पाँच वर्षका बालकलाई उनका माताका साथ घरबाट निकालिदिएँ । उनलाई कतै हिंस्रक जनावरले खाला । ओहो ! म कस्तो स्त्रीको दास भएँ । मेरो कुटिलता त हेर्नुहोस् । उनी मेरा काखमा बस्न चाहन्थे तर म दुष्टले अलिकति पनि ख्याल गर्न सकिनँ ।”
श्रीनारदजीले भने :—“राजन् ! तपाईं आफ्ना बालकको चिन्ता नगर्नुहोस् । उनको रक्षक भगवान् हुनुहुन्छ । जुन काम ठुला–ठूला व्यक्तिहरूले गर्न सक्तैनन् त्यही काम पूरा गरेर उनी शीघ्र तपाईङ्कहाँ नै फर्कनेछन् र यसका कारण तपाईङ्को प्रतिष्ठा पनि धेरै बढ्नेछ ।”
यता ध्रुव मधुवनमा पुगेर नदीमा स्नान गरे र त्यो रात पवित्रतापूर्वक उपवास गरेर नारदजीका उपदेशानुसार एकाग्रचित्तले परमपुरुष श्रीनारायणको उपवास गर्न थाले । उनले तीन–तीन रातका अन्तरमा शरीर धान्नका लागि वैध र वेलको फल मात्र खाएर श्रीहरिको उपासना गरेर एक महिना व्यतित गरे । अर्को महिनामा उनले छ–छ दिनपछि सुकेको घाँस र पातमात्रै खाएर हरिगुण गाइरहे । तेस्रो महिनामा नौ–नौ दिनमा पानी मात्र पिएर समाधियोगद्वारा श्रीहरिको आराधना गरिरहे । चौथो महिनामा उनले श्वासलाई जितेर बाह«–बाह« दिनपछि केवल हावामात्र खाएर ध्यानयोगद्वारा भगवान् परमात्माको आराधना गरिरहे । पाँचौं महिनामा ध्रुवले श्वासलाई जिते र एउटा खुट्टाले उभिएर भगवान् परमात्मालाई स्मरण गरिरहे ।
जब राजकुमार ध्रुव एउटा खुट्टाले खडा भए तब उनको औंलाले थिचेर पृथ्वी यसप्रकारले डोलायमान भएर झुक्यो, जस्तो कुनै हात्तीले डुङ्गामा टेकेपछि डुङ्गा माथि उठ्दछ र त्यस्तै जब हात्ती डुङ्गामा चढेपछि डुङ्गा दायाँ–बायाँ, तल–माथि लच्केर डगमगाउँछ त्यसरी नै पृथ्वी हल्लिन थाल्यो ।
ध्रुवले आफ्ना इन्द्रियद्वारा तथा प्राणलाई रोकेर अनन्य बुद्धिले विश्वात्मा श्रीहरिको ध्यान गरिरहे । यसप्रकार उनको समष्टि प्राणले अभिन्न्ता हुनाका कारणले सम्पूर्ण चराचर जगत्का जीवका श्वासप्रश्वास रोक्न थाल्यो । यसका कारण सम्पूर्ण लोक तथा लोकपालहरूलाई अत्यन्तै ठुलो पीडा भयो र सबै डराएर त्राहिमाम भएर श्रीहरिको शरणमा गए । अनि देवताहरूले श्रीहरिलाई भने :—“भगवन् ! समस्त जीवहरूको शरीरको प्राण एकै पटक रोकियो । यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन । तपाईंले हामी सबैलाई रक्षा गर्नुपर्यो ।”
भगवान्ले भने :—“देवतागणहरू ! तपाईंहरू नआत्तिनुहोस् । नडराउन्होस् । बालक ध्रुवको सत्यतपका कारण यस्तो भएको हो । तपाईंहरू सबै आ–आफ्ना लोकमा जानुहोस् । म सबै ठिक गर्छु ।”
जब भगवान् गरुडमा सवार भएर आफ्ना भक्तलाई हेर्न मधुवनमा गइरहेका थिए, बालक ध्रुवले पनि त्यही रूपलाई स्मरण गरेर ध्यान गरिरहेका थिए । यसका कारण उनले भगवाङ्को त्यो रूपलाई आफूतर्फ खिचे । ध्रुव एकदम झस्किए जब उनले आँखा उघारे । भगवान् त्यही रूपमा उनका अगाडि प्रकट भइसकेका थिए । प्रभुको साक्षात् दर्शन पाएर बालक ध्रुवलाई एकदम कौतूहल भयो । उनी प्रेममा अधीर भए । उनले पृथ्वीमा लम्पसार परेर भगवान्लाई साष्टाङ्ग दण्डवत् गरे । फेरि उनले यसरी प्रेमले भरिपूर्ण दृष्टिले भगवान्तर्फ हेरे मानौं उनका नेत्रहरूले पिइरहेका छन्, मुखले चुमिरहेछन् र भुजाहरूले अँगालिरहेछन् । उनी हात जोडेर प्रभुजीका अगाडि खडा थिए र उहाँको स्तुति गर्न चाहन्थे तर कसरी स्तुति गर्ने उनी जान्दैनथे ।
भगवान्ले उनको भाव बुझे र आफ्ना वेदमय शङ्खले उनको गालामा बिस्तारै स्पर्श गराए । शङ्खको स्पर्श हुनेबित्तिकै उनलाई वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त भयो र जीव तथा ब्रह्मका स्वरूपका बारे पनि निश्चय भयो । उनले त्यसपछि धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्रीहरिको स्तुति गर्न थाले ।
स्तुतिबाट प्रसन्न भएर नारायणले ध्रुवलाई काखमा लिएर भने :—“पुत्र ! तिम्रा सम्पूर्ण इच्छाहरू पूरा हुनेछन् । तिम्रो सत्यभक्तिले प्रसन्न भएर मैले त्यो लोक प्रदान गरिरहेको छु जसका चारैतिर ज्योतिष चक्र घुमिरहन्छन् र जसका आधारमा सबै ग्रह–नक्षत्रहरू घुम्दछन् । प्रलयकालमा पनि जसको कहिल्यै नाश हुँदैन, सप्तऋषिहरू पनि जसको प्रदक्षिणा गर्दछन्, तिम्रो नाममा सम्पूर्ण लोकहरूले यो लोकलाई ध्रुवलोक भनी विख्यात रूपले मान्नेछन् । यो लोकमा तिमीले ३६ सहस्रवर्ष राम्रोसँग शासन गर्नेछौ । सबै प्रकारका सुख, ऐश्वर्य भोग गरेर समस्त प्रजाहरूलाई आनन्द प्रदान गरेर अन्त्यमा तिमीले मेरो लोक पनि पाउने छौ ।”
बालक ध्रुबलाई यस्ता वरदान दिएर श्रीनारायण आफ्ना लोक फर्के । श्रीनारायणको वरदानले ध्रुव सप्तऋृषि ताराका माझ ध्रुवतारा बनेर अत्यन्त तेजिलो रूपमा आकाशमा देदीप्यमान भई चम्किएर प्रसिद्ध भइरहे ।
नोट :– उत्तानपादको अर्थ जसको शिर मुन्तिर र पैताला सबभन्दा माथिल्लो भागमा भन्ने हुन्छ । संसार जित्ने राजा जनताको नोकरका रूपमा बस्ने अर्थ छ उत्तानपादमा । सुनीतिको अर्थ हो राम्रो बुद्धि । सुरुचिको अर्थ हो राम्रो मन । राजाका यी बुद्धि र मनहरूबीचको द्वन्द्व यस पौराणिक कथामा मन्थन गर्न खोजिएको छ । ध्रुवको अर्थ हुन्छ एकदम परम सत्य ध्रुवसत्य र यहाँ यस पौराणिक कथामा ध्रुवसत्यको शक्ति कत्ति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा दर्साइएको छ । यो पौराणिक कथा मेरो हालै प्रकाशित पुस्तक सत्य पौराणिक कथामा सङ्ग्रहित छ । यस पुस्तकमा यस्ता विविध ठुला साना गरी ३१ पोराणिक कथाहरू सङ्ग्रहित छन् ।
२०७६ असोज २३ गते बिहीबार
भकतजनमार्ग, काठमाण्डौँ ।
कुकुरको पुच्छर (कथा)
जे जे र्हेछु सबैले नै तिम्लाई माग्न थाल्यो ।